AMISOM oo qabsatay magaalada Marka - BBC News Somali
AMISOM oo qabsatay magaalada Marka
Image caption Ciidamada AMISOM waxa awooddooda ay ku faafinayeen meelaha kabaxsan caasimadda Muqdisho
War saxaafadda loogu talagalay ee ay soo saareen ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in saaka ay ka saareen magaalada Marka wax ay ugu yeereen argagixisada xiriirka la leh al-Qaacida.
Hawlgalka oo dhacay waaberigii ayay ku sheegeen in ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay la kulmeen iska caabin yar, kadibna ay ku baxeen dhinaca Shalaambood oo ay ka sameysteen difaac sida qoraalka lagu sheegay.
Magaalada Marka oo 90KM koonfur ka xigta caasimadda Muqdisho ayaa waxa gacanta ku hayay al-Shabaab tan iyo bishii November ee sanadkii 2008.
Hadalka qoraalka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in bilihii ugu dambeeyay ay magaalada ku qaxayeen saraakiisha sar sare ee al-Shabaab oo guul darro ay uga imanaysay ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
War saxaafadeedkan AMISOM ayaa lagu sheegay in qabsashada Magaalada Marka inay muhiim u tahay hawlgallada mustaqbalka ee AMISOM si loo xoreeyo magaalada Kismaayo, oo ah meesha dakhliga ugu weyn uu ka soo galo kooxaha xagjirka ah, sida hadalka loo dhigay.
Waxaa kale oo lagu sheegay in tani ay muhiim u tahay xilligan xasaasiga ah ee Soomaaliya ay yeelaneyso Guddoomiye baarlamaan iyo Madaxweyne, taasi oo soo gabagabeyneysa 21 sano oo dalka ay ka jireen dowladdo KMG ah.
Image caption Askari saaran baabuur militeri oo AMISOM ay leedahay
Taliyaha AMISON Lt.General Andrew Gutti, ayaa yiri "qabsashada Magaalada Marka waxa ay sii xoojineysaa ammaanka Soomaaliya, taasi oo u diideysa in kooxaha argagixisadu ay weerar ka soo qaadaan"
Waxa uu ugu baaqay dadka magaalada Marka inay degenaan muujiyaan, isaga oo ka codsaday inay kala shaqeeyaan AMISOM xasillinta ammaanka.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Qabsashada magaalada Marka ay ka dhigan tahay in marka la eego gobolada Banaadir, Shabeellaha Dhexe, iyo Shabeellaha Hoose oo AMISOM ay mas'uuliyaddeeda koowaad ah in magaalada Jowhar oo iyana 90KM ka xigta waqooyi caasimadda ay tahay tan keliya ee hadda ku hartay gacanta al-Shabaab.
Ciidamada AMISOM ayaa awooddooda ku baahinayay goobo ka baxsan magaalada Muqdisho tan iyo markii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu kordhiyay tiradooda oo laga dhigay 17,000 oo askari.